Mishumo ya CEO - Drotrong Chinese Herbs Biotech Co., Ltd.
Tinokugamuchirai kuti mushanyire webhusaiti yeDrotrong Chinese Herb Biotech Co, Ltd. Ndatenda nekuteerera kwako uye nerutsigiro. Ndinoda kutaura zvinyadzo zvangu kwauri iwe pachinzvimbo chevatinoshanda navo.
Kubva 1995, Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. yanga ichishanda mukuvaka rese indasitiri cheni yemakwenzi echiChinese, ayo anosanganisira maChinese mahebhu seedling, kudyara, kutanga kugadzirisa, kudzika kugadzirisa, kuburitsa mishonga nekutengesa. tiri kugara kuomerera musimboti "kusimukira zvebhizimisi, tichiziva win-zvisamumirira pamwe, kupa mipiro kuti vanhu uye vanhu". Isu tinozvipira kukudziridza chiChinese herb mushonga indasitiri ine sainzi, kushingaira, hunyanzvi uye hwakaomarara maitiro.
Parizvino, tanga tichipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvemafekitori anozivikanwa ekugadzira mishonga, vagadziri vezvizoro, uye mafekitori ekubvisa emiti mudzimba nekunze, uye kuhwina kuvimba nekurumbidzwa kubva kuvatengi vedu. Isu tinoziva kusangana nezvinodiwa mumusika uye tine chivimbo chekuita mhinduro yakanakisa uye nekuona kuti mhinduro dzedu dzinoshanda zvizere, dzinoshanda zvine mutsindo uye dzinoramba dzichichinjika nguva dzese.
Kwemakore makumi maviri nemashanu apfuura, isu tave tichigara tichitora edu ehukama mabasa. Iyi ndiyo sarudzo isingadzivisike yekuwana budiriro inoenderera. Isu tiri kugara tichitsvaga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, tekinoroji yepamusoro uye matarenda ehunyanzvi. Munguva nyowani, isu tichaongorora nekushandura maitiro ebhizinesi, kuramba tichivandudza nekuita budiriro kuti tione kusimudzira kwakasimba. Tichaita zvipo zvedu mukusimudzira indasitiri yemishonga uye hutano hwevanhu.
Ini ndinotarisira nemoyo wese kuti nevatengi vedu vatsva nevakuru, ngatiitei ramangwana rakanaka pamwe chete!